HORDHAC: Real Madrid v Atletico Madrid – Gool FM
HORDHAC: Real Madrid v Atletico Madrid
( La Liga ) 29 Sab 2018. Cayaarta weyn ee Derby Madrid ayaa Caawa waxay dhexmari doontaa kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid
Naadiga Los Blancos ayaa Qasaaro xun kala soo laabtay Sevilla kulamadii la cayaartii bartamaha todbaadkii hore ee horyaalka La Liga, Balse tijaabo adag ayay ku mari doonaan Garoonkooda Bernabeu marka ay marti qadaan Dariskooda Atletico.
Waqtiga: 09:45 pm ( SGA )
Garsooraha: Juan Martínez Munuera
Wararka Ladaba Koox
Daniel Carvajal ayaa qaba dhawaac, laakiin waxaa laga yabaa in lagu riixayo inuu cayaaro kulanka Atleti.
Marcelo ayaa dhaawac looga saaray cayaartii Real Madrid ee bartamaha asbuucii hore, taa micnaheeda Nacho ayaa la arki karaa inuu ka dheelo dambeedka bidix.
Casemiro ayay suuragal tahay inuu noqdo halboolaha qadka dhexe, halka Isco uu wajaho waqti kabasho ah markii lagu sameyay qaliin.
Jose Gimenez ayaa ka canabaya dhibaato yar oo muruqa ah, laakiin lama filayo in taa ay ka joosijo cayaar sidaan u weyn oo ka dhan ah Real Madrid.
Rodri ayaa la filyaa in loo magacaabo qadka dhexe ee kooxda martida.
Lucas ayaa qar u saaran inuu booska garab bidix ee daafac kala wareego Filipe Luis waana xulashada Diego Simeone.
Kulanka maanta dhexmaraya labadaan koox waa dheeshii 163-aad oo ay ku kulmaan horyaalka La Liga. Los Blancos ayaa hogaanimeysa dhan guulaha waxyna badiyeen 86 kulan Atletico 39, iyo 37 cayaar oo ku dhamaaday barbaro.
Labada koox ee Real iyo Atletico ayaa dhaliyay seddax gool afartii dheel ee isugu dambeysay.
Afar kamida shantii cayaar ee ugu dambeysay oo ay horyaalka ku kulmaan kooxahan ayaa ku dhammaaday barbaro, waxaana kamida labadii dheel eek al cayaartii lasoo dhaafay.
Atletico ayaa guuleysatay kulankii ugu dambeyay ee kooxahan waa cayaartii Uef Super Cup oo ay ku badiyeen 4-2 horaantii xagaagan, sido kale waa guuldarro la’aan mid kasta oo kamida shantii kulan oo ay booqdeen garoonka Bernabeu kulamada Horyaalka Sare ee Spain.
HORDHAC: Juventus v Napoli
SAADAASHA kulamada Premier League ee Maanta...(Maxaa lagu sheegay kulanka Chelsea vs Liverpool?)